Warshadaha iyo soo -saareyaasha Wax -soo -saarka Shiinaha ee Wooden | SJJ
Alaabada Dhiirrigelinta Qoryaha Alaabta alwaax ee tayada leh, ECO-saaxiibtinimo leh. Waxaa lagu heli karaa qaabab kala duwan, cabbir ama naqshad. Ku habboon qurxinta guriga, xusuusta, xayeysiiska iyo hadiyadaha dhiirrigelinta. Urta dabiiciga ah iyo dareen xarrago leh. Ku fiican ururinta. Qaab aad u fiican oo lagu xidho obsta subabilityability of obje ...
Alaab alwaax ah oo tayo sare leh, ECO-saaxiibtinimo leh. Waxaa lagu heli karaa qaabab kala duwan, cabbir ama naqshad. Ku habboon qurxinta guriga, xusuusta, xayeysiiska iyo hadiyadaha dhiirrigelinta. Urta dabiiciga ah iyo dareen xarrago leh. Ku fiican ururinta. Hab aad u wanaagsan oo lagu xiro ujeeddooyinka ka -reebitaan la'aanta shirkadda istiraatiijiyadda hadiyaddaada.
Qalabka: Beech/basswood/qoryaha MDF
Habka Logo: Daabacaadda/ warqad bireedka leh daabacaadda dib -u -dhigga/ daabacaadda silkscreen/ xardho laser.
Hore: Qurxinta looxa, Calaamadaha iyo kuwa kale